ပြင်သစ်တွင် "Admiral": ကြိယာ conjugation နှင့်နာမ်
(Admiral မှ) ပြင်သစ်ကြိယာ "Admiral" Conjugate လုပ်နည်း
သငျသညျလိမ့်မယ် "Admiral" "Admiral" Conjugating ၏လွယ်ကူ
ပြင်သစ်ကြိယာ Admiral "လေးစားပါတယ်မှ" ကိုဆိုလိုတယ်။ ဒါဟာပုံမှန်ကြိယာနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက်ရန်၎င်း၏အကြံအစည်ကအလုပ်မလုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်ကြိယာစေသည်။ သို့သျောလညျး, ဤသူသည်သင်တို့ပွငျသစျထဲတွင်သိလိုစေခြင်းငှါတစ်ခုတည်းသော Admiral မဟုတ်ပါဘူး။
Admiral များအတွက်ပြင်သစ်နာမ်ကဘာလဲ? ၏စကားပြောသည့်အခါ "တစ်ခု Admiral," သင် le amirateur ဟူသောစကားလုံးကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ, "ငါ့လျှို့ဝှက်ချက် Admiral" "မွန် admirateur လျှို့ဝှက်၏။ "
ပြင်သစ်ကြိယာ Admiral များအတွက် conjugation
သင့်ရဲ့ပြင်သစ်လေ့လာမှုများ, သင် Admiral conjugating ၏လွယ်ကူခြင်းလေးစားပါတယ်ရောက်လိမ့်မည်။
ဒါကဖြစ်ပါတယ် ပုံမှန်အစည်းအဝေး -ER ကြိယာ , ဒါကြောင့်အသစ်ကနောက်ဆုံးတွင်အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံအောက်ပါအတိုင်း။ ပြီးတာနဲ့ သင် conjugation သင်ယူ Admiral အဘို့, ကြိုးစားပြီး အခြားတူသောချစ်စဖွယ် နှင့်အတူတူပင်ပုံသေနည်းကိုဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမိ။
ဤဇယားကိုသငျသညျ Admiral များ၏အမျိုးမျိုးသော conjugation ပြသထားတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအတွဲ ဘာသာရပ်နာမ်စား ဟာည ', tu, nous, etc - - သင့်လိုအပ်ချက်များအတွက်မှန်ကန်သောတင်းမာနေအတူ။ ဥပမာအားဖြင့် "ငါအရမ်းလေးစားမိပါတယ်" "j'admire" ဖြစ်ပါတယ်နှင့်တရားဝင်သို့မဟုတ်အများကိန်းဖြစ်ပါတယ် "သင်အရမ်းလေးစားမိပါတယ်ပါလိမ့်မယ်" "vous admirerez ။ "
မြတ်နိုး admirerai admirais
Admiral admireras admirais
မြတ်နိုး admirera admirait
admirons admirerons admirions
admirez admirerez admiriez
Admiral admireront admiraient
Admiral 's အများကိန်း
အဆိုပါ အများကိန်း Admiral ၏ Admiral ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြိယာနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကကြိမ်မှာနာမဝိသေသန, gerund, ဒါမှမဟုတ်နာမ်အဖြစ်အသုံးဝင်သောတွေ့ပါလိမ့်မယ်မသာ။
Admiral ၏ Pass တေးရေးဆရာများနှင့်အတိ participle
အဆိုပါဖွဲ့စည်းရန် Pass တေးရေးဆရာ Admiral ၏, သင် auxilliary ကြိယာနှင့်အတိတ် participle လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အရန်ကြိယာ တစ်ခုဖြစ်သည် avoir ကြောင့် conjugated ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ အတိတ် participle Admiral နှင့်မဆိုဘာသာရပ်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အတူတူကြောင်းထားကြပါစို့။ သငျသညျပြင်သစ် "j'ai Admiral" ကိုသုံးပါနှင့် "သူတို့မြတ်နိုး, ခဲ့ပါဘူး" ကိုပြောင်းလဲ "ils ont Admiral ။ " အတှကျပါလိမ့်မယ် "ငါလေးစား" ဟုပြောနိုင်ရန်အတွက်
လေ့လာဖို့ပို Admiral conjugation
သငျသညျအခြိနျမှနျမှ Admiral အခြား conjugation သုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ပေမည်။
ဒါကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်, အနာဂတ်နှင့် Pass တေးရေးဆရာအာရုံစိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နေစဉ်, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာသည်ဤအထောကျအကူရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ subjunctive Admiral ၏လုပ်ရပ်မေးခွန်းထုတ်စရာသို့မဟုတ်မသေချာမရေရာသည့်အခါအသုံးပြုသည်။ ထိုနည်းတူစွာ ထိုခြွင်းချက်ကြိယာစိတ် ကတစ်စုံတစ်ခုအပေါ်မှီခိုမယ့်အခါ, အသုံးပြုသည်။ သင်သာမလိုအပ်သင့်ပါတယ် အဆိုပါ Pass ရိုးရှင်းသော နှင့် မစုံလငျ subjunctive ပွငျသစျထဲတွင်တရားဝင်ရေးသားသည့်အခါ။
မြတ်နိုး admirerais admirai admirasse
Admiral admirerais admiras admirasses
မြတ်နိုး admirerait admira admirât
admirions admirerions admirâmes admirassions
admiriez admireriez Admiral admirassiez
Admiral admireraient admirèrent admirassent
သင်တို့သည်လည်းလို့ရပါတယ် ဟာအလွန်အရေးကြီးသည်ကိုအသုံးပြုဖို့ Admiral သည်။ ဤပုံစံအသေးစားနှင့်တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုမှုများသို့မဟုတ်တောင်းဆိုချက်တွေအတွက်အသုံးဝင်သည် - မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့, တိုတောင်းသောအာမေဍိတ်။ တစ်ဦးတည်းမြတ်နိုးသည့် tu အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ပြီးကတည်းက - tu မြတ်နိုး - ထိုအရေးကြီးသောသုံးပြီးသောအခါ, နာမ်စားသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ရှိပါတယ်။
အီတလီတွင် Grammar ၏အမှီတကဲ
အောက်တွင် မှစ. များအတွက်မှာအားဖြင့်နှင့်အတူအင်္ဂလိပ်လို preposition စကားစုများ, မရှိရင်
အတိုက်အခံ - များ၏ရှေ့မှောက်၌
အီတလီကြိယာ conjugation: Telefonare
Développer - ထုတ်လုပ်မည်မှ
'' Afin Que က 'Subjunctive လိုအပ်ပါသလား?
'' Devoir 'နဲ့' Falloir '' အကြားခြားနားချက်ဆိုတာဘာလဲ
ပြင်သစ် Subjunctive Irregular conjugation
အားလုံး-အချိန်ထိပ်တန်း 10 American Idol ဖျော်ဖြေ
Synthetic Cubism ဆိုတာဘာလဲ
Ida Husted Harper ကို
အိုင်ယာလန်ရဲ့ 8 အများစုမှာအောင်မြင်သောရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများ
ပိုး, အမိန့် Coleoptera ၏အလေ့အထများနှင့်လက္ခဏာရပ်တွေ
တစ်ဦးပြစ်မှုဆိုင်ရာ Infraction ဆိုတာဘာလဲ
အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand ပေါလု၏တစ်ဦးကအတ္ထုပ္ပတ္တိ
ခြေထောက်အဘို့အက Short နှင့်ပြင်းထန်သောကာယဗလလေ့ကျင့်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်း
Scuba ဥပဒေစည်းကမ်းဘက်တော်သားများအပေါ် Venturi ညှိယူ (Off-တွင်ထိုးဆင်း / Pre-ထိုးဆင်း, နှင့် +/- Switch)
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: လင်းဒေးလ်၏တိုက်ပွဲ (Frayser ရဲ့လယ်ယာ)
ဇီဝဗေဒ prefix နှင့်နောက်ဆက်: -stasis
တစ်ဦး Reiki ဝေမျှမယ် Hosting များအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ
Sivapithecus, ဒါ့အပြင် Ramapithecus အဖြစ်လူသိများသည့်မျောက်
နယူးယောက်စီးတီး၏ Boroughs ဘာတွေလဲ?
တစ်ဆဲလ်က Wall ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ရာထူးအမည်
တစ်ဦး Polyurethane သို့မဟုတ် Polystyrene Surfboard ရွေးချယ်ခြင်း
အမေရိကားရဲ့အတိတ် မှစ.6ဓားပြ Baron